Ibhishi nendawo yokubhukuda iseduze kakhulu ne-Tybee! - I-Airbnb
Ibhishi nendawo yokubhukuda iseduze kakhulu ne-Tybee!
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Adrianna
U-Adrianna Ungumbungazi ovelele
Woza uhlole ukuvuselelwa okusha kwechibi lethu !! Kanye nezinto eziningi ezintsha ezisanda kungezwa! Umbhede omusha sha, amashidi nemicamelo ethokomele ekamelweni. Ubhavu omusha sha kanye neshawa. Ikhishi lifakwe yonke into oyidingayo. Okuyisisekelo njengamapuleti nezitsha kanye ne-toaster, i-blender, igrill yaseGeorge Foreman nokunye!. I-TV entsha engu-43 inch endaweni yokuhlala nenye ekameleni.
I-condo iyizinyathelo ezisuka echibini nolwandle lomndeni wezithandani ezi-4 noma ezi-2. I-INTERNET ENGAWUNAKHO OKUPHEZULU nokuningi!!
Siyakwamukela ku-Sand Dollar! Le-condo yesitezi sokuqala enethezekile iyikhaya elihle leholide lomuntu oyedwa noma ababili noma umndeni omncane.
Okusanda kulungiswa, "i-Sand Dollar" ilala abantu abadala abangu-2 nezingane ezingu-2 ngokunethezeka futhi inekhishi elisha sha elihlanganisa i-granite countertop ne-microwave entsha, izindawo ezintsha ezinhle, usofa omusha oguquguqukayo (umbhede olala abantu ababili), ihholo elivulekile, umatilasi omusha sha kanye ne-comforter namathawula amasha. Izihlalo zetafula lokudlela ezingu-4 zinethezekile futhi i-TV engu-43 "ifakwe odongeni ukuze kubonwe kalula kuwo wonke ama-engeli asekamelweni lokuphumula nasekhishini.
4.74 · 321 okushiwo abanye
Lo mphakathi onesango elizimele unedamu elikhulu, izihlalo eziningi zokuphumula futhi owawo ukuhamba phansi endundumeni nokufinyelela ogwini oluthulile.
Pakisha futhi udlale kuyatholakala ekamelweni
Amathawula asebhishi nezihlalo zasebhishi ziyatholakala. Amathoyizi ambalwa ezingane olwandle atholakalayo ukuze asetshenziswe.
Ngaphezu kwesitofu, iMicrowave, Imbiza Yekhofi, Amabhodwe namapani, Izitsha Zasekhishini eziyisisekelo, I-Cutlery kanye Nezitsha Zokudla, siphinde sinikeze Izingilazi Zewayini, i-Blender, iToaster, I-Sandwich Maker, i-George Foreman Grill, i-Waffle Maker.
Ngiyajabula ukuncoma izindawo zokudlela zasendaweni nezinto ongazenza endaweni, okuhlanganisa nedolobha i-Savannah. Ngishayele noma nini ngesikhathi sokuhlala kwakho!
UAdrianna Ungumbungazi ovelele